Fayraska aduunka xidhay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka » Fayraska aduunka xidhay
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Investments • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
12-kii bilood ee la soo dhaafey, COVID-19 ayaa sii dheereeyey sinnaan la'aantaas, aragtida ay soo bandhigtey bishii Febraayo, hay'adda xoogga saareysa shaqaalaha ee Qaramada Midoobay, ILO, oo caddeysay in labada bilyan ee ka shaqeeya qaybta aan rasmiga ahayn ay si gaar ah u soo shaac baxeen.
Bishii Maarso, hay'addu waxay la socotey saadaalinno soo jeedinaya in malaayiin lagu riixi karo shaqo la'aanta, shaqo la'aanta, ama xaaladda qallafsan ee saboolnimada shaqada.
"Tani hadda maahan oo kaliya dhibaato caafimaad oo caalami ah, sidoo kale waa suuqa ugu weyn ee shaqada iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee saameynta weyn ku leh dadka", ayuu yiri Agaasimaha Guud ee ILO Guy Ryder. Hay'addu waxay daabacday talooyin ku saabsan siyaabaha loo yareyn karo waxyeelada habnololeedka, oo ay ka mid yihiin ilaalinta shaqaalaha ee goobta shaqada, barnaamijyada kicinta dhaqaalaha iyo shaqada, iyo dakhliga iyo taageerada shaqada.
Haysashada sahayda cuntada ee socota
Bishii Abriil, baaxadda dhibaatada adduunka ayaa muuqatay, iyada oo ay soo saartay UN-ta warbixin ay muujisay in saboolnimada iyo gaajadu ay kasii darayaan, iyo in waddammada ay horay u saameeyeen dhibaatooyinka cuntada ay aad ugu nugul yihiin aafada. Daraasadu waxay tiri "waa inaan sii wadnaa silsiladaha muhiimka ah ee keenaya cuntada, si dadku ay uhelaan nolol waarta cunada", ayaa lagu yiri daraasada iyadoo carabka ku adkeysay sida ugu dhaqsiyaha badan ee loo ilaalinayo gaarsiinta gargaarka bani'aadamnimada "si loo sii wado dadka dhibaatooyinka haysta la quudiyo oo loo noolaado"
Adeegsiga gaadiidka dadweynaha sida xarumaha cuntada, qaababka caadiga ah ee guryaha loo geeyo, iyo suuqyada guurguura, bulshada waxay ku qasbanaadeen inay helaan habab cusub oo ay ku quudiyaan dadka saboolka ah iyo kuwa nugul, iyagoo la tacaalaya xayiraadaha COVID-19 ee dhaqdhaqaaqa.
Kuwani dhammaantood waa tusaalayaal siyaabaha magaalooyinka Latin America ay isugu soo baxeen si ay u taageeraan dadkooda, isla markaana ka tarjumaya digniinta Hay'adda Cuntada iyo Beeraha (FAO), in halista caafimaad ee muwaadiniin badan oo reer magaal ah ay aad u sarreyso inta lagu jiro aafada, gaar ahaan 1.2 bilyan oo ku nool xaafado isku raran ah, iyo degsiimooyin kale oo aan rasmi ahayn.
Haweenka ayaa qaada culeyska
"Haweenku waxay qaadayaan dhibaatada ugu badan ee dhibaatada COVID-19 maadaama ay u badan tahay inay waayaan ilaha dakhligooda isla markaana aysan u badnayn inay daboolaan tallaabooyinka ilaalinta bulshada". Taasi waxay ahayd Achim Steiner, oo madax ka ah hay'adda horumarinta ee UNDP ee UNDP, isagoo xusay saameynta uu cudurkan ku hayo haweenka, isagoo tilmaamaya xog la sii daayay bishii Sebtember.
Waxay shaaca ka qaaday in heerka saboolnimada ee haweenka uu kordhay in kabadan sagaal boqolkiiba, oo u dhiganta ilaa 47 milyan oo haween ah: tani waxay u taagan tahay dib u laabasho tobanaan sano oo horumar ah si loo ciribtiro saboolnimada ba'an dhowrkii sano ee la soo dhaafay.
Phumzile Mlambo-Ngcuka, oo ah agaasimaha fulinta ee haweenka UN, ayaa sheegtay in kororka saboolnimada ba'an ee haweenka ay tahay "eedeyn cad oo ku saabsan ceebaha qotada dheer" ee qaababka bulshada iyo dhaqaalaha loo qaabeeyay.
Si kastaba ha noqotee, Mudane Steiner wuxuu ku adkaystay in qalabkani uu jiro si horumar weyn loogu sameeyo nolosha haweenka, xitaa inta lagu jiro xiisadda hadda jirta. Tusaale ahaan, in ka badan 100 milyan oo haween iyo gabdho ah ayaa saboolnimada laga saari karaa haddii dawladuhu ay horumariyaan helitaanka waxbarashada iyo qorsheynta qoyska, lana hubiyo in mushaharku u siman yahay kan ragga.
Lixdii carruur ahba mid ayaa ku dhacay
Horumarka lagu yareynayo saboolnimada carruurta ayaa sidoo kale sanadkan saameyn ku yeeshay. Sanduuqa Carruurta ee Qaramada Midoobay, UNICEF, iyo Bangiga Adduunka ayaa bishii Oktoobar soo wariyay in ilaa 365 milyan oo carruur ah ay ku nool yihiin saboolnimo ka hor inta uusan cudurku bilaabmin, waxayna saadaaliyeen in tirooyinkaasi ay si aad ah kor ugu kici doonaan dhibaatada ka dhalatay awgeed.
Saboolnimada ba'an ayaa boqolaal milyan oo caruur ah ka lumineysa fursad ay ku gaaraan awooddooda dhabta ah, marka laga hadlayo horumarka jireed iyo garashada, waxayna ku hanjabtaa awooddooda inay ku helaan shaqooyin wanaagsan qaan-gaarnimada.
Sanjay Wijesekera, oo ah Agaasimaha Barnaamijyada UNICEF “Sannadkan oo keliya waa inay naxdin geliyaan cid kasta”, “Dowladdu waxay si deg deg ah ugu baahan tahay qorshe ka soo kabashada carruurta si looga hortago carruur aan tiro lahayn iyo qoysaskooda inay gaaraan heerarka saboolnimada ee aan la arkin sannado badan, sannado badan.”
Gargaarka nambarada rikoorka
Bishii Diseembar, Qaramada Midoobay waxay saadaalineysay in diiwaanka 235 milyan oo qof ay u baahan doonaan gargaar bani'aadamnimo sannadka 2021, oo ah koror ku dhowaad 40 boqolkiiba sanadka 2020 taas oo gebi ahaanba ka dhalanaysa aafada.
"Sawirka aan soo bandhigeyno waa aragtida ugu mugdiga iyo mugdiga badan ee baahida bani'aadamnimada muddada soo socota ee aan weligeen dejineyno", ayuu yiri madaxa gargaarka degdegga ah ee Qaramada Midoobay, Mark Lowcock. "Taasi waxay ka tarjumaysaa xaqiiqda ah in cudurka faafa ee 'COVID' uu halakeeyay dhammaan waddammada ugu nugul uguna nugul adduunka.
Mr. Lowcock wuxuu ka digay in baaxadda caqabadaha horyaala bini'aadanimada sanadka soo socda ay aad u weyn yihiin - oo sii kordhayaan. "Haddii aan ka gudubno 2021 annaga oo aan haysan macaluul weyn taasi waxay noqon doontaa guul muhiim ah," ayuu yiri. Nalalka casaanka ayaa biligleynaya, jalaska dhawaaqa dhawaaqa ayaa soo dhacaya. ”
Waqti heshiis cusub oo caalami ah
Dhamaadka sanadka, madaxa qaramada midoobay wuxuu soo saaray xasuusin ah in heerarka saboolnimada iyo sinaan la'aanta ee sanadkaan la arkay ay aad uga fogyihiin lama huraan, iyo in aduunyo cadaalad ah ay wali macquul tahay, iyadoo aan loo eegin naxdin ba'an sida aafada.
Isaga oo hadlayey bishii Diseembar, Mr. Guterres waxa uu muujiyey rajadiisa in aafadu ay kicin karto isbeddellada loo baahan yahay si loo gaadho nidaamyada ilaalinta bulshada ee adduunka oo dhan.
Isagoo milicsanaya faallooyinkiisa ku saabsan sinnaan la'aanta la sameeyay sanad ka hor, ka hor inta uusan aafada ku soo food saarin, madaxa UN-ka wuxuu sheegay in aduunku u baahan yahay heshiis caalami ah oo cusub, “halkaasoo awooda, ilaha iyo fursadaha sifiican loogu wadaago miisaska go'aan qaadashada ee caalamiga ah, iyo farsamooyinka maamulka ayaa sifiican uga tarjumaya xaqiiqooyinka maanta jira ”.
XIGASHO Xarunta Wararka UN-ka